Abamuru nke Nnukwu Atụmatụ Ahịa | Martech Zone
Gịnị mere anyị mkpa ahịa ọdịnaya? Nke a bụ ajụjụ ọtụtụ mmadụ na ụlọ ọrụ a anaghị aza nke ọma. Ndị ụlọ ọrụ ga-enwerịrị atụmatụ ọdịnaya siri ike n'ihi na imirikiti usoro ịme mkpebi zụrụ agbanweela, site na mgbasa ozi n'ịntanetị, tupu atụmanya ahụ erute ekwentị, òké, ma ọ bụ ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ azụmaahịa anyị.
Ka anyị nwee ike metụta mkpebi nzụta ahụ, ọ dị oke mkpa na anyị ga-ahụ na akara anyị dị, a mata anyị dị ka azịza, ma ụlọ ọrụ anyị hụrụ ka ikike. Ọ bụrụ na ọdịnaya dị mma dị na oge kwesịrị ekwesị yana ozi ziri ezi, anyị nwere ike iwulite ntụkwasị obi na mbido ịzụ ahịa wee mee obere ndepụta nke ụlọ ọrụ ịhọrọ.
Ulo oru sitere na niche nke ulo oru di iche iche na B2B na B2C arenas na-adabere na udi ihe di iche na uzo ha na ahia ahia. Mgbasa mgbasa ozi, isiokwu, akwụkwọ akụkọ na blọọgụ na-anọgide na usoro kachasị elu azụmaahịa nke ọtụtụ azụmaahịa jiri gosipụta na eserese dị n'elu. Ofdị ọdịnaya ndị ọzọ na-enwetakwa ala na ewu ewu n'etiti ndị ahịa gụnyere infographics na vidiyo n'etiti ndị ọzọ. Jomer Gregorio, CJG Digital Ahịa
Uru 8 siri ike-eleghara anya nke ahịa ọdịnaya
Ahịa ọdịnaya na-ewepụta ihe ndị ọzọ inbound okporo ụzọ gaa na saịtị gị.
Ahịa ọdịnaya na-abawanye etinye aka na ndị mmadụ ezubere iche.
Ahịa ọdịnaya na-ewepụta ọzọ na-edu.
content marketing enwekwu ahịa.
Ahịa ọdịnaya na-ewuli elu eke njikọ ewu ewu.
Ahịa ọdịnaya na-ewuli mara amara.
Ahịa ọdịnaya na-eme ka ị dị ka chere onye ndu.
Ahịa ọdịnaya bụ dị ọnụ ala karịa ụdị ahịa ahịa.
Hmmm… nke ikpeazụ chọrọ tweaking. Ọ bụ ezie na ire ahịa ọdịnaya nwere ike ịdị ọnụ ala karịa ogologo oge, ọ chọrọ obere mbọ na ume iji mee ka ndị na-ege gị ntị chọọ, guzobe ikike ịchọrọ, wee bido ịmalite ịkwọ ụgbọala. Agaghị m ada mbà na azụmaahịa azụmaahịa ndị ọzọ ruo mgbe ndị ndu na-asọ!
Tags: ndị na-ege ntịuruuru nke ahịa ọdịnayamara amaraewu njikọọnụ ala ahịaahịa dijitalụ dijitalụcontent Marketinguru ahịa ahịanjikọ akan'ịwa nduinbound okporo ụzọjomer Gregorionjikọ ewu ewuchere onye nduochichi echicheOmenala ahia